३३ किलो सुन काण्ड: ठोस प्रमाण नै फेला नपरेपछि छानविन समिती पुर्वाग्राही,किन जोगाइँदै छ ‘ठूला माछा’ कायस्थलाई ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
३३ किलो सुन काण्ड: ठोस प्रमाण नै फेला नपरेपछि छानविन समिती पुर्वाग्राही,किन जोगाइँदै छ ‘ठूला माछा’ कायस्थलाई ?
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्यामा ठोस प्रमाण नै फेला नपरेपछि प्रहरीको अनुसन्धान र छानविन समिती पुर्वाग्राहि बनेको आरोप लागेको छ । सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिमा रहेका एसएसपी वसन्त लामाले तस्करीमा मुछिएका पूर्व एआईजी विजयलाल कायस्थलाई उन्मुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेको स्रोतले बतायो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।